Ma Ila Aragteen?	Qalinkii: Liban Ismail Abdilahi
Waxa waayadan dambe iclaamada kala duwan ee ay bulshadu isticmaasho ku soo badanayay qoraalo xambaarsan hab gudbin khatar badan oo ka soo baxaya kooxo abaabulan isla markaana markaad qoraaladooda akhrido ay ka muuqato farshaxanimo iyo hibo qoraal oo kugu kalifaya si kasto uu qoraalkaasi u dheer yahay inaad akhrisato, mararka qaar kalmadaha iyo erayada ay isticmaalayaan waxay ku galinayaan dhaygag iyo jeclaysi aad u xoog badan, sidoo kale khatarta uu qoraalkaasi xambaarsan yahay si toosa markiiba kuuguma sheegayaan balse waxaad aayar aayar ugu daadagaysaa khatartii oo la qayb-qaybiyay isla markaana aan toos laguu odhanayayn waxaasi waa qalad balse lagu ladhayo haasaawe iyo hab sheeko ahaan.
Hadaba akhriste waxaad isweydiinaysaa tollow kooxdaasi maxay ahaayeen?
Maxay tahay khatarta ay gudbinayaan?
Sidee ayay u gudbiyaan khatartaas?
Maxay tahay ujeedada kooxdaas ka dambaysa?
Maxay u cadaysan waayeen afkaartooda ama fikirkooga?
Akhriste su,aalahaas iyo kuwo ka badaniba waxay yeelanayaan badweyn aan laga dabaalan Karin qormadana aan lagu soo koobi Karin balse waxan soo gudbin doonaa waxoogaa jawaabo ah oo su,aalahaas la xidhiidha isla markaana iiga soo baxay markii aan waxoogaa yara dhuuxay hab dhaqanka kooxdaas ama shabakadaas si aynu fahan yar oo kooban uga qaadanana iskuma mashquulinayno wax tariikh ah ama faalo dheer balse waxaan uga dan leeyahay uun meesha ay u socdaan inaynu wada dareeno uun.
Kooxdaasi waa shabakad aaminsan fikirka caqlaaniyada oo doonaya in wax walba uu ku salaysnaato waxay ila tahay isla markaana u aaminsan in diintu tahay wax wakhtigeedii dhamaaday oo aan nolosha la jaan qaadayn.
Khatarta ugu badan ee ay gudbinayaan waxay tahay inay ummadda ku abuuraan shaki iyo waswaas taas oo keensanaysa in shakigu qofka la gaadho meel khatar ah oo uu diintaba kaga bixi karo, kal-ku dhiga ay wadaana waxa la yidhaahdaa “wax kasta oo laguu sheego intaanad qaadan horta waa inaad shakidaa”.
sida ay wax u gudbiyaana waxa ay tahay hab qoraal ay u soo dhigayaan sidii sheeko iyo hasaawe ahaan, iyagoo isku lamaanayna siyaasiyiinta iyo wadaadada oo ka dhigaya inay yihiin labada bulshada la hadhay ee dib u dhaca ugu wacan hada waliba garoo markaad akhrido qoraalkuba waxa uu daaran yahay wadaadada iyo ducaada diinta xambaarsan oo aynaan u baahnayn inaynu sharaxaad ka bixino kaalinta ay bulshada ugu jiraan iyo xaga Alle sida looga amaanay.
Sida oo kale qaababka ay u soo dhigaan waxa ka mida inay fanka iyo suugaanta ka dhigaan shayga kaliya ee qooya qalbiga, sidoo kalena fanka iyo suugaanta waxay ka dhigaan inay xidida iyo ruuxda quudiyaan isla markaana loo baahan yahay in aan laga dheeraan, waxaanay ugu talo galeen inay meesha kaga saaraan quraanka iyo sunanka diinta si dadku ay u wada dhagaystaan heesaha iyo muusiga waayo iyagu ma doonayaan sugaanta oo dhan balse waa heesaha meesha ay u socdaan .
Waxa kale oo ay isticmaalaan qisooyin xambaarsan carab nacayb aad iyo aad u saayida mihiimaduna tahay in la yidhaahdo kab iyo xaarkeed waa la isku tuuraaye macal luuqada carabiga inaga dhaafa , si aanay markaa diintana fahan badan ugu yeelan ileen luuqadii carabigay inoogu qoran tahaye.
Waxa iyaduna meesha ka madhnayn inay aad ugu ololeeyaan in la yareeyo dhasha iyo tirada taranka taas oo ah fikirad raqiis ah
Ujeedada kooxdaas ka dambaysaa waxay tahay inay bulshada kala dagaalamaan diinta oo ay ku beeraan fikirkan caqlaaniyada iyo wixii la hal maala oo ay bulshadu ka baxdo ku xidhnaanshaha illaahay iyo rasuulkiisa (N.I.N.K.H) si dadku ay baadi u noqdaan.
Hadii ay cadaystaan waxa ay aaminsan yihiin waxa meesha ka baxaysa inay wax gudbiyaan oo la dhagaysto ama la akhristo waayo waxa lagu wada baraarugayaa waxa ay gudbinayaan inay tahay baadi iyo jidkii naarta oo ay dadka ugu yeedhayaan si hadaba ay taas ugu badbaadaan waa inay si xeeladaysan u gudubiyaan meelaha ay bulshada ka weerayaana waa meelo halis oo aan aad loo dareemayn.
Isku soo wada duuboo akhriste hadii wadaadkii bulshada nacsiiyaan maxaa hadhay saw dadkii isugu soo hadhi maayaan intii aan aqoonta fiican u lahayn diinta ka dibna jidkii lumi mayo.
Sidoo kale hadii suugaantii oo heesaha oo kaliya laga dhagaystaa keensan mayso in quraankii iyo sunankii la ilaawo oo halkaana khasaare wayni ka soo bixi mayo.
Shakigu waa xaaraan hadaba akhriste hadii shaki lagugu beero maxaa kuu hadhay ama saw inaad meel cidla istaago maaha.
Hadii carabtii la naco sow afkoogiina la raacin maayo, hadii la raaciyana saw diintii aqoonteedii hoos u dhici mayso haday u dhacdana saw dhibi iman mayso.
Gabagabo: waxaan akhristayaasha kula talin lahaa in qoraalada qaabkaas u yaala markaad aragtaan aad u dhuuxdaan nuxurka ay xambaarsan yahiin
Waxaan naftayda iyo nafihiinaba kula dardaarmayaa inaanay kooxdaasi inagu hodin qoraal macaanida iyo adeegsiga falsafada ay wadaan.
Waxaan u soo jeedinayaa bulshada inay baraarug badan u lahaato waxa loo soo gudbinayo ee aan waafaqsanayn shareecada.
Inaynu fahan iyo fiirsasho dheer u yeelano diinteena Inaynu ku dadaalno inaynu xakamayno nafaheena